musha nyika dzakabatana Singers Tumira Malone Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeAmerican Rockstar ine mazita chaiwo 'Austin Richard Post'. Yedu Post Malone Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ongororo yacho inosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga / hwemhuri, dzidzo / basa rake rekuvaka, hupenyu hwepakutanga, mukurumbira, kusimuka kune mukurumbira, hupenyu hwehukama, hupenyu hwemunhu, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvinhu zvidiki-zvinozivikanwa pamusoro pake.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye anokurumidza kusimuka 'rockstar' rapper munhu wese ari kutaura nezvazvo. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Post Malone's biography iyo inonyanya kufadza. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Post Malone Dzekuita Nyaya Yevana:
Tumira Malone ine zita rekuzvarwa Austin Richard Post akaberekwa pazuva rechina raJuly 4 kuna amai vake, Nicole Frazier Lake uye baba, Rich Post muSyacacuse, New York, United States.
Post anoshandisa yakawanda yehupenyu hwake hwepakutanga achigara nababa vake uye amai vekurera anonzi Jodi. Maererano ne Syracuse.com, baba vake Rich Post nemukadzi wake, Jodie (Post Malone's Nhanho-Amai) vakasangana apo vese vari vaviri vaishanda kuAtlas Health Care Linen Services, bhizinesi rekuwachira maindasitiri mudhorobha reSirakuse.
Kurera mumhuri yepakati-yemhuri mumusha weNew York State guta, Post Malone pakutanga aigara naamai vake muSyacacuse, New York vasati vatama kuenda kunobatana nababa vake naamainini kuna Grapevine, Texas. Paaigara kuTexas, Post Malone akagovana ruzivo rwepamoyo nemwana wake wekubereka Mitchel, akaberekwa amai vake vekutanga vasati vaonana nababa vake.
Kudzoka kuTexas, baba vaPost Malones vakashandira timu yeDallas Cowboys nhabvu semaneja vasati vazove Mutevedzeri weMutungamiri wezvokudya nechinwiwa kunhandare yeAT&T.
Post Malone Dzidzo uye Basa Kuvaka:
Kuve na baba vaive disc jockey panguva yavo yehudiki mazuva, zvaive nyore kuti Post diki kudanana nekutengeserana. Rich Post akaunza mwanakomana wake kumhando dzakasiyana dzemimhanzi kusanganisira hip-hop, nyika, uye dombo achiri mukomana mudiki. Aive baba vane matarenda mazhinji aida kuti Post atore kubva kwaakabva.
Kutamiswa nerudo rwababa vake kumimhanzi, Post Malone akatanga kuzvidzidzisa kutamba gitare kuburikidza nekuona mavhidhiyo eYouTube uye kutamba mumwe mutambo wevhidhiyo unonzi "Guitar Hero". Gare gare, Malone akaenderera mberi nekudzidza kuGrapevine High School kwaaitarisa kumimhanzi nekunyora nziyo kupfuura kuverenga mabhuku ake.
Mushure mefundo yake yepuraimari, Post Malone akabvumidzwa kudzidza kuTarrant County College uko kwaakapa kuyedza kwekupedzisira kutarisa pamabhuku ake akakundikana. Hazvina kutora nguva kuti afunge zvekusiya chikoro.
Mushure mekusiya chikoro, akatamira kuLos Angeles, California naJason Probst shamwari yake inoitika kuva nyanzvi yemutambo wenhabvu. Iyi sarudzo yakave shanduko yemutambo sezvo zvaive nyore kwaari kuti apinde munyika yemimhanzi, achizvisarudzira basa.
Post Malone Yekutanga Basa Rehupenyu:
Malone akaramba achiona chiratidzo uye aive akabatikana mukutamba gitare. Kunyangwe hazvo paine matambudziko. Pane rimwe zuva, akapinda muongororo yeCrown the Kingdom muna 2010, asi akarambwa mushure mekunge tambo dzegitare yake dzatyoka mukati meongororo. Varombo iye !!
Iyo Rwendo rwekutsvaga hukuru yakaenderera sezvo akagara pasi nguva zhinji ari ega achizvigadzirira mimhanzi iye achishandisa iyo FL studio software. Post akaenderera mberi nekuridza mabhebhi ake nguva nenguva achimunyengerera nekuwedzera dzakasiyana gitare uye mimhanzi mimwe mhedzisiro yezviridzwa pamwe nekurekodha.
Mu2011, Malone anogadzira yake yekutanga hip-hop mixtape inonzi 'Mudiki uye Mushure Mavo Pfuma' Iyi mixtape yakamuita mukurumbira mukoreji yake uye vashoma vateveri vaakange aunganidza vakatanga kumudaidza- “Iye Anonyanya Kuva Mukurumbira”.
Tumira Malone Mugwagwa weMukurumbira Nyaya:
Mushure mekubudirira kwakakura kwaaive nako nemessape yake yekutanga, Malone yakakurumidza kuwana kutariswa kwemakambani erekodhi. Pasina nguva, akasaina kontrakiti yake yekutanga yekurekodha neiyo rekodhi reRepublic Record.
Waizviziva here?… Chibvumirano chisati chakasainwa neRepublic Record, Post Malone yakanga ichishanda neChicken Express Restaurant kuitira kuti zvimwe zvinangwa zvibatane.
Tumira Malone Kukwira Mukurumbira Nhau:
Kuve mumiriri akajeka weAmerican rap tsika, yakasarudzika yakasarudzika Record-Breaking Surance, Post akaona mikana yaakabata zvakanyanya. Mushure mekushanda nesimba uye kudzidza, akazoburitsa izvo zvakamuunzira chikuva chinodiwa mukubudirira kwake. Post Malone yakaburitsa yake imwechete yakachena White Iverson muna 2015 iyo yakasimbiswa quadruple platinamu neRIAA.
Izvo hazvina kumira ipapo, muna Zvita wegore ra2016, muimbi ari kusimuka akaburitsa dambarefu rake re studio rakanzi "Stoney". Iyi yakanaka album yakazviona ichikwenya Michael Jackson's 'Thriller' kwemavhiki mazhinji ari pamusoro gumi yeGumi R & B / Hip-Hop Albums Chart. Panguva ino, aiziva kuti aizove akapfuma kwazvo.
Kubudirira "Stoney" yakave shanduko yakazomuwanisa mukana wekukwiza mafudzi nenyeredzi hombe. Kubva ipapo, Malone ave nekubatana kwakabudirira nema greats emumhanzi senge Justin bieber, 50 muzana, Mudiki Thug, Kanye West, Pakati pevamwe.
Post Malone Ukama Hupenyu Chokwadi:
Kumashure kwemurume akabudirira, pakanga paine mukadzi akashamisika achidhonza maziso, mumwe akazova musikana wake. Post Malone ine hukama nehukama nemugadziri wemimhanzi Ashlen Diaz (akazvarwa muna Zvita 19, 1995).
Maererano nemishumo yepamhepo, kufambidzana nerunyerekupe rwakatanga muna 2015 uye musikana akanaka- Ashlen Diaz akawana mukurumbira mukuru mushure mekutanga kudanana neMalone. Kusvika pakumuziva, Diaz mumwe munhu aive nehushamwari hwekugara uye ane hunhu hwekunyara.
Post Malone inoramba yakavanzika zvakanyanya nezvehukama hwake nyaya, kunyangwe vaviri vacho vaine zvavaive vakakwira nekukwira. Ivo vakamboita kakamupfupi pfupi imwe nguva mushure mekubvunzurudza kwavo kwekutanga Breakfast Club. Maererano ne US Weekly MunaNovember 2018, ivo duo vakapedzisira vadana hukama hwavo mushure mekufambidzana kwemakore matatu.
Post Malone Hupenyu Hwechokwadi Chokwadi:
Kusvika pakuziva hupenyu hwePost Malone kwaizokubatsira iwe kuwana mufananidzo uri nani wake. Kutanga kuenda, iye mumwe munhu ane shungu kwazvo uye ane hanya. Post Malone ane hanya zvakanyanya nezve nyaya dzemhuri uye neimba yake, hunhu uhwu hunonzi hunhu kune ake Cancer zodiac maitiro.
Kechipiri, Post is fan yakakura yeBud Light Beer. Mukati mezvikwereti zvake zvakawanda, iwe unogara uchitsvaga furu yeBud Light iyo yaakazorora dzimwe nguva. Iye anonwa kunyange iye achitamba pachikuva.
Munguva yake yekuzorora, anoda kutarisa basketball uye zvirokwazvo, iye waanofarira basketball nyeredzi ndiAllen Iverson, mutambi wenhabvu ane mukurumbira akafuridzira zita rekuti hit single White Iversion. Hupenyu hwega hwaMalone hahuzove hwakakwana pasina kutaura rudo rwake kumitambo yemavhidhiyo. Iye anofarira fan yemitambo yemavhidhiyo neyake yaanofarira kuve Nhandare dzehondo, Kudanwa kweDuty WWII, nezvimwe.
Tumira Malone Hupenyu Hwemhuri Hupenyu:
Malone haina kubva kune vaitambura, asi mhuri yepakati-yemhuri kumashure. Iye zvino ngatipei imwe nzwisiso mumhuri yake kutanga nababa vake.
Nezve baba vaPost Malone: Richard Lloyd Post ndibaba vaMalone, mumwe anoonekwa sedombo rekona rebasa reMalone kutanga uye kubudirira. Richard Lloyd akazvarwa musi waMay 11, 1966 uye akakurira padhuze neRochester muPenfield.
Mushure mekupedza kudzidza kubva kuSyrause University mu1988, Rich akapedza makore gumi nematanhatu muSirakuse. Senge panguva yekunyora, achiri kushanda saMubatsiri Director weKudya neZvinwi kunhandare yeAT & T yeDallas Cowboys nhabvu timu.
Nezve amai vaPost Malone: Nicole Frazier Lake ndiye amai vaMalone. Kungofanana nemurume wake, iye anobvawo kudunhu reUS reNewYork. Iye anobva kumusha weWalton uri muNewYork. Nicole padanho rekupedzisira rehupenyu hwake akatamira kuTexas kuti ave nemwanakomana wake, kuramba wakamuka hukama hwakanaka hwaamai-mwanakomana naye.
Nezve Post Malone amai vokurera: Jodie Larson Post ndiye amai vokurera vaMalones, Akazvarwa musi waGunyana 9, 1970, muCamillus, New York. Jodie akawana dzidzo yepamusoro kuLe Moyne College muSyrause.
Asati asangana nababa vaPost Malone, akambove nemurume akatadza kuroora izvo zvakakonzera kurambana. Mushure mekurambana, Jodie aive ega nemwanakomana wake Mitchell (Post Malone stepbrother). Akasangana ndokudanana naRich Post iye achishanda kuchipatara cheSyrause. Vakaroora uye vakatama nevana vavo vaviri.
VERENGA Justin Bieber Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Nezve Post Malone hama yekurera: Mitchell Post ndibaba vekwaMalone vekuzvarwa naJodie. Ivo vaviri hama vakakura pamwechete muGrapevine, Texas. Mitchell akazvarwa amai vokurera vaMalone vasati vasangana nababa vake.
Post Malone Lifestyle Chokwadi:
Sezvo panguva yekunyora, iyo superstar ine mari inofungidzirwa yemadhora mazana mana emadhora 31. Kuve nekukoshesa izvi pasina mubvunzo kunopfuurira mukunakidzwa kwehupenyu hupenyu hunoonekwa nyore nekuve nemotokari dzinopenya pakati pezvimwe zvinhu zvakanaka.
Imwe yechinangwa chekutanga chePost Malone yaive yekutora mota yake yemaroto, ita tsika yeLincoln Continental inodiwa kukwidza hupenyu hwake. Munguva pfupi yapfuura, akazviwanirawo iyo 2019 Bugatti Chiron.
Chimwe chiratidzo chehupenyu hwake hwakapfuma ndehwekuve muridzi wemba dzakati wandei kusanganisira yake yepamusoro ye $ 3 Million M nyumba kuNorthern Utah. YePosvo, kune zvechokwadi kune zvakakwana mari yekugara hupenyu hwakanaka. Chokwadi, hbudiriro yemari inosungirirwa zvakananga pahunhu hwake semumhanzi rapper, muimbi, munyori wenziyo, uye mugadziri wenhoroondo.
Post Malone Chokwadi:
Tumira Chitendero chaMalone: Nezve chitendero, chinamato cheMalone chichiri chisina kujeka senge panguva yekunyora. Nekudaro, akambobvuma kuti anoshandisa kuve zvitendero zvepamusoro. Mumashoko ake;
“Ndainamata zvekunamata, ndaitenda muna Mwari. Asi ikozvino ini ndinoona kuburikidza nazvo. Zvakanaka kutsigira chimwe chinhu chaunotenda mauri, ndinofunga, asi vanhu vari kushandisa mari yakawanda, uye Mwari haana hanya kuti chechi yako ine mambo wegoridhe. "
Tumira Tattoos dzaMaron: Post Malone inonyatso kuzivikanwa neayo mazhinji mavara. Yake yekutanga tattoo yaive Pl * yboy Bunny. Iye zvakare ane tattoo yechiso iyo inoti 'Nguva dzose Kuneta' pazasi pemeso ake. Zvinotoshamisa kuti zvakakwana, akainki naiye ega matattoos dhizaini. Akanyora zvakare mashoma eshamwari dzake, iro rinoita kuti ave nematarenda mazhinji.
Kusvuta uye Kunwa: Malone anoda kunwa uye kuputa, kutaura idi, anorova uye anonwa dzimwe nguva ari pachinhanho achiri kuita mimhanzi.
About Izita Chairo: Zita rake chairo ndiAustin Richard Post. Waizviziva?… Akasarudza Post Malone sezita rake rezita apo aive nemakore gumi nemashanu kuburikidza neRep Name Generator online.
Kukudzwa kwake Muchidimbu: Panguva yekunyora, akahwina maviri American Music Award- mubhodhi weDhodhi Music Award, uye MTV Vhidhiyo Music Award. Post yakatumidzirwazve mana Grammy Awards.
CHOKWADI KUTI: Thanks for readingu yedu Post Malone Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Concise & inodzidzisa kune imwe nhanho. Ndakaona chinyorwa ichi mushure mekuverenga chimwe chidimbu nezvevateveri vari kunetsekana zvakanyanya nezve hutano hwemurume wechidiki uyu & hutano. Mushure mekuongorora vhidhiyo yaiperekedza chinyorwa ichocho ndinogona kunyatsoona kuti kunetsekana kwakanyanya saka ndakafunga kutarisisa zvakadzama sezvo ndisati ndambonzwa chero rimwe rebasa rake uye kungoziva nezvake kuburikidza nemidhiya. Kunetseka kwangu kuri kuna Austin .. kwete "Post". Austin anoda kubatsirwa & anoida pdq & kana akasagamuchira iro rubatsiro iwe uchakurumidza kuwedzera an... Read more Â »